फेरिपनि पेटमा छो’री हुनसक्ने भन्दै श्रीमानले गर्भ’वती श्रीमतीको पे,टनै का,टि`दिए ! – Dainik Sangalo
फेरिपनि पेटमा छो’री हुनसक्ने भन्दै श्रीमानले गर्भ’वती श्रीमतीको पे,टनै का,टि`दिए !
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन ०९, २०७८ समय: १४:२४:१९
आफ्नी गर्भव’ती श्रीमतीको धा’रि,लो ह ति’या,रले प्र’हार गरेका पतिलाई प्रह’रीले केही समय अघि नियन्त्रण’मा लिएको छ । घ’टना हो भारतको उत्तरप्रदेशको बदायूं जिल्लाको ।पत्नि ले यसअघि ५ वटी छोरी जन्माए’की अनिताको पेट’मा छैटौं छोरीको आशं’कामा गर्भ’वती श्रीमतीको पन्नालालले हँसि’याले पे ’ट का’टिदिएपछि घाइ’ते अ’वस्थाकी गर्भव’तीलाई आ’ क स्मिक रु’पमा दिल्लीको एक अस्पता’लमा भ’र्ना गरेर उप ’चार सुरु गरियो ।पन्नालालकी साली रेखाले मिडि’यालाई प्रति’क्रिया दिँदै भनिन् पन्नालालका पाँच छोरी छन् र छैटौं सन्तान पनि छोरीको रुपमा ज,न्मि’योस् भनेर उनी चाहँदैनन् ।धेरै छोरी जन्माए’को भन्दै दिनहुँ दिदीसँग भिनाजु झ,ग’डा गर्दै आएको र यो पटक पनि दिदीको पे’टमा छोरी नै भएको आशं’कामा उनले यो हर्क’त गरेको रेखा बताउँछिन् ।
गाडी अनियन्त्रीत भएर ट्रकलाई ठ’क्क’र दि’एपछि एक गाडीमा सवार ६ जनाको घटनास्थलमै मृ,त्यू भएको छ । छिमेकी देश भारतको राजस्थानको जयपुरस्थित रहेको चाकसुमा सो दुर्घटना भएको भारतीय सँचारमाध्यमहरुले जनाएको छ । वाईपास रोडमा ईको भ्यानको ट्रलीमा स्कोरपियो पसेपछि सो दु,र्घ,टना भएको हो ।
सो दुर्घटनामा परी सोही ठाउँमै ६ जनाको मृत्यू भएको भारतीय सँचारमाध्यमहरुले जनाएको छ । सोही गाडीमा सवार १० जनामध्ये ६ जनाको मृ,त्यू भएको तथा अन्य ४ जना गम्भिर घा,ई,ते भएका छन् । उनीहरुको उपचार नजिकको अस्पतालमा भइरहेको छ ।
जानकारी अनुसार मृ,त,क सबै राजस्थापनको टिचर्स इलिजिविलिटी टेष्ट (आरईईटी) को परीक्षाको लागि बाराँदेखि सीकर गइरहेको थियो । गा
गाडी अनियन्त्रीत भएर ट्रकलाई ठ’क्क’र दि’एपछि एक गाडीमा सवार ६ जनाको घटनास्थलमै मृत्यू भएको छ । छिमेकी देश भारतको राजस्थानको जयपुरस्थित रहेको चाकसुमा सो दु,र्घ,टना भएको भारतीय सँचारमाध्यमहरुले जनाएको छ । वाईपास रोडमा ईको भ्यानको ट्रलीमा स्कोरपियो पसेपछि सो दु,र्घ,टना भएको हो ।
सो दुर्घटनामा परी सोही ठाउँमै ६ जनाको मृत्यू भएको भारतीय सँचारमाध्यमहरुले जनाएको छ । सोही गाडीमा सवार १० जनामध्ये ६ जनाको मृ,त्यू भएको तथा अन्य ४ जना गम्भिर घाईते भएका छन् । उनीहरुको उपचार नजिकको अस्पतालमा भइरहेको छ ।
जानकारी अनुसार मृतक सबै राजस्थापनको टिचर्स इलिजिविलिटी टेष्ट (आरईईटी) को परीक्षाको लागि बाराँदेखि सीकर गइरहेको थियो । गाडी अनियन्त्रित भएर ,भएको प्रहरीलाई उदृत गर्दै भारतीय सँचारमध्यमहरुले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
डी अनियन्त्रित भएर दु,र्घ,टना भएको प्रहरीलाई उदृत गर्दै भारतीय सँचारमध्यमहरुले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
Last Updated on: September 25th, 2021 at 2:24 pm